Ahoana no hamoronana ny lisitry ny lisitry ny lisitra avo lenta izay mitarika ny fikarohana ara-tsakafo?
Ny mpandraharaha tsirairay sy ny hakingan-tserasera dia mikaroka ireo lisitra avo lenta avo lenta mba hanatsarana ny laharan'ny tranonkala sy hanatsarana ny fidiram-bola an-tserasera. Misy fomba maro ahafahana manangona jiro amin'ny tranokalanao. Tsy ny rehetra anefa no toa azo itokisana sy azo ekena. Androany dia handeha hizara aminareo ny loharano tsara indrindra ho an'ny fanorenana rohy. Amin'ny fanarahana an'io toro-lalana io, afaka mamorona lisitra avo lenta ianao ary manangana ny fahefanao eo imason'ny milina fikarohana.
Ny tompon-tranonkala rehetra raha toa ka orinasa madinika na seha-pihetseham-barotra goavana tahaka ny fanehoana ny fijoroana vavolombelon'ny mpanjifa satria fomba iray tsara ahafahana manangona laza tsaratsara ary manampy ireo mpitsidika vaovao amin'ny tranonkala handraisana fanapahan-kevitra marina. Izany no antony mahatonga anao ho afa-po amin'ny vokatra na ny serivisy ampiasainao, raha mieritreritra ny handefa fijoroana vavolombelona ho azy. Mba hanamarinana anao ho toy ny mpanjifantenana, matetika ny fivarotana tranokala sy tranokala matetika dia mametraka backlink ny tranokalanao ho anao raha tsy misy anao manontany azy ireo momba izany.
Noho izany, amin'ny maha-vahaolana anao dia mety ho lasa mpividy loharanom-baovaona maimaim-poana mba hahazoana rohy avy amin'ny azy ireo.
Karakarao ny fahafahana manangana tranonkala vaovao avy amin'ny bilaogy tsara indrindra
Ireo rafitra fananganana Spammy mifamatotra amin'ny tantara. Amin'izao fotoana izao, mba hamoronana lisitra lisitra avo lenta, mila mampiasa mailaka ianao hanamboarana rindry vita amin'ny kalitao. Voalohany indrindra, mila mahita olona mahomby ianao. Ny fomba tsotra indrindra hanaovana izany dia ny mahita ny lisitry ny lahatsoratra bilaogy tsara indrindra. Ao anatin'ireo lisitra ireo, afaka mahita ny mpiara-miasa aminao ianao ary manangana fifandraisana tsara amin'izy ireo. Mba hahitana mpiara-miasa tonga lafatra dia azonao atao ny mametraka ireto fanalahidy manaraka ireto ao amin'ny boaty fikarohana Google - "bilaogy tsara indrindra amin'ny taona", "ny bilaogiko indrindra (lohahevitra)", "ny lisitry ny (lohahevitra). "Tadiavo ireo blôgy ireo ary mialà ao amin'ny lisitry ny backlinks anao.
Ireo hevitra mpitoraka bilaogy
Ny valin'ny mpiblôgy dia afaka mitondra lanjany ho an'ny fampiroboroboana ny orinasa. Raha mivarotra zava-tsarobidy sy sarobidy ho an'ny olona ianao, dia afaka mamadika mora foana an'izany ao anaty ravin-taratasy mivalona ambony. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny manome ny tsenan'ny sain-tsain-tsainao amin'ny vokatra na ny serivisy maimaim-poana. Izy ireo dia hamorona fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatrao amin'ny endritsoratra na sary ary mizara izany amin'ny mpanaraka azy, mitarika ireo mpanjifa vaovao ho eo amin'ny toerana misy anao.
Link roundups na lahatsoratra isan-kerinandro, isan-kerinandro na isam-bolana izay mampifandray amin'ny votoaty miavaka. Azonao atao ny mahita randran-rohy eo amin'ny tsenanao, izay mampiditra ireto fanalahidy manaraka ireto ao amin'ny boaty fikarohana Google - ny "keyword" + "ny rohy mifandraika"; "Ny teny fanalahidinao" + "Ny teny fanalahidy" + "tsara indrindra", sy ny sisa sy ny sisa. Eo amin'ny sehatra manaraka, dia ampidiro ny votoatin'ny olona izay mihazakazaka iray amin'ny mety ho an'ny fivoaran'ny raharaham-barotra Source .